Heart Museum: နူရာဝဲစွဲ ၊ လဲရာသူခိုးထောင်း
နူရာဝဲစွဲ ၊ လဲရာသူခိုးထောင်း
All of my friends watch this video.
How pitty our lovely people &
Do they make anything wrong with them?
ရက်စက်ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းလိုက်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေ
သူတို့ ဘယ်နေရာ အမှားလုပ်မိလဲ
ဒီလူတွေ မုန်တိုင်းမိတာ မှားလား
*** စကားလုံး အသုံးအနှုံး အရမ်းပြင်းထန်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။ သူတို့တွေ ခံစားနေရတဲ့
ဒုက္ခတွေ ကျွန်တော် ကြည့်ပြီး သောကဗျာပါဒက ဒေါသကို လာဆွနေလို့ပါ ခင်ဗျာ။.......***
Posted by Heartmuseum at 2:30 PM
I watched this video clip before.
They all seen furious and frustrated as they have been sufferalot. I can feel deeply their anger and it does make me cry..., :(((
They all are in my prayer and wishing all of them back on track soon.
ဒီမြေမှာ လူဖြစ်ရတာ မှားတယ် အားလုံးကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးး လူမဆန်တဲ့ အာဏာရူးတွေကြောင့် ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကိုမွေးခဲ့တဲ့ ဒီမြေက လူတွေကို ချစ်တယ် အစ်ကို ဒါကြောင့် ပိုခံစားရတယ် ။
တကယ်ဗျာ...။ ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့ဘူး...။ မျက်ရည်တောင် လည်တယ်ဗျာ...။
လေးမ ကြည့်နေတာ ...we have no place to live မှာပဲ ရပ်နေတယ်နော်.. ပြီးသွားပြီလား..။
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ ဘာမှ မမှားပါဘူးဗျာ ...
ပြောမယ်ဆို နာဂစ်တောင်မမှားဘူး ...
မှားနေတာ လူမဆန်တဲ့ သူတို့ပဲ ...
ဖြစ်သင့်တဲ့ ဒေါသတွေပါပဲ ...
ဒီထက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောချင်ရင် ပြောသင့်ရင် ပြောရမှာပေါ့ဗျာ ...
ဒီအချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ သောကတူ ဒေါသတူတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ ။
မှားလား လို့ မတွေးတော့ပါဘူး ။ အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ထားသူတွေ ကိုယ်ချင်းစာ တရားလေး နဲနဲပါးပါးလောက် ၀င်လာပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ်။ ဘာလို့များ အဲလောက် နှလုံးသား မရှိရတာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားလို့ မရနိုင်အောင်ပါပဲ။ အာဏာကို အထိခိုက် မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ရှဉ့်လည်းလျောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာတဲ့လမ်းတွေ တစ်ပုံကြီး။ နဲနဲလောက် လူသားဆန်ရင်ကို တော်တော်ကောင်းမှာပါ။ အားလုံး ၀ဋ် ကြွေးရှိရင်လည်း ဒီဘ၀မှာပဲ ကြေပါစေတော့လို့ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။
hm...ya.some ppl..canbso cruel!!!
wish these victims can get in any form..
actually me feel helpless too..being far away from mm..all we can do is donate money and join in activities to call on for more donation and help for them...
aww..dote kha dote kha..
lu ma san de lu dway ...naw..
ရက်စက်လိုက်ကြတာ... ရက်စက်လိုက်ကြတာ... လူမဆန်တော့ဘူး။ ဘယ်နှကြိမ်မြောက်မှန်းမသိ မျက်ရည်ကျမိပြန်ပြီ ကိုအညတရရေ...
Mar dar ka Ba Gyi twe bar:P